Marobe ny tolotra ara-pizahantany nampahafantarin’ireo mpandraharaha mpisehatra ary nahafahan’ireo mpitsidika nahita ireo zava-baovao maro tsara ho fantatra. Manodidina ny 60 isa ireo Agences de Voyage namaly ny antson’ny Ofisy Nasionalin’ny Fizahantany eto Madagasikara (ONTM) izay hiezaka hampiseho hatrany ny fahatsaran’i Madagasikara mba hisintonana mpizahatany. Ankoatra izay, nahatratra 50 mahery ny kaonferansa natao nahafahan’ireo mpandraharaha nitsirika izay mety ho famatsiam-bola mety ho azo, indrindra ny hitadiavana tsena avy any ivelany. Afaka nampiditra mpizahatany 1 500 000 ny Nosy Maorisy nefa kely noho i Madagasikara, hoy ny filoham-pirenena tamin’ny fandalovany teny ka tsy maintsy hihoatra lavitra ny 300 000, izay anisan’ny mpizahatany amin’izao, izany mandritra ny 5 taona. Paikady hampitomboana ny isa ny fanamboarana ny lakandranon’i Mpangalana. Tsiahivina fa vahiny nasaina manokana tamin’ity ITM andiany fahavalo ity ny Indonezia izay niezaka nampiseho ny maha izy azy nandritra ny 4 andro. Amin’ny fialantsasatra lehibe amin’ity taona ity ihany dia ho hita eo izay vokatra nentin’ny ITM koa dia samy miandry ny rehetra.